आइसीयुमा रहेका ठाकुरको अवस्था कस्तो छ ? नेता कार्यकर्ता निरास — Imandarmedia.com
आइसीयुमा रहेका ठाकुरको अवस्था कस्तो छ ? नेता कार्यकर्ता निरास
काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। मेडिसिटी अस्पतालको आइसीयुमा रहेका उनको स्वास्थ्य अवस्था समान्य रहेको छ ।
कार्यक्रममा लागि भैरहवा गएको बेला बुधबार बिहान अस्वस्थ्य भएपछि उनलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको थियो। आइसीयुमा राखेर उनको उपचार चलिरहेको छ र स्वास्थ्य अवस्था समान्य रहेको लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य उमाकान्त झाले बताए ।
अध्यक्ष ठाकुरको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षणको परिणाम हेरेर मात्र ठाकुरलाई डिस्चार्ज गरिने नेता झाले बताए। नवलपरासीबाट भैरहवा आएका अध्यक्ष ठाकुरलाई हिजो राती ज्वरो र झाडा पखाला सुरु भएको थियो।
त्यसपछि उनलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। त्यसपछि डाक्टरको सल्लाहमा उनलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो।
तेस्तै, सत्तारुढ पाँच दलिय गठबन्धनले आफ्नो तर्फबाट साझा उम्मेदवार तोकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने बारे केन्द्रमा गृहकार्य चलिरहँदा गुल्मीको एक गाउँपालिकामा स्थानीय स्तरमै साझा उम्मेदवार नै घोषणा गरिएको छ।
गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतालाई साझा उम्मेदवारको रुपमा घोषणा गरेको हो।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारले जितेको यस गाउँपालिकामा पाँच दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार घोषणा गरिएको हो ।
मंगलबार गाउँपालिकाको ठूलीचौरमा चुनावी घोषणा सभाको आयोजना गरी सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रको नेतालाई साझा उम्मेदवार बनाउने पाँच दलीय गठबन्धनले घोषणा गरेको हो।
माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक बुद्धि जिसीले उम्मेदवारको टुङ्गो नलागे पनि पार्टीका गाउँपालिका अध्यक्ष देविराम अर्यालको नाममा छलफल भइरहेको बताए।
हाल माओवादी केन्द्र मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका अर्याल २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए।गठबन्धनले पालिका बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन सुरु गरेको र छिट्टै अन्य पालिकाको पनि टुङ्गो लगाएर निर्वाचनमा होमिने बताए।
गठबन्धनमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रूपमा चुनावी घोषणा सभा गरी अर्याललाई अध्यक्षमा उठाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।
तेस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले निर्वाचन आचार संहितामा त्रुटि रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ।
आयोगले हालै मात्र पास गरेको आचार संहितामा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले पनि प्रचार प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था राखेको भन्दै एमालेले ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो।
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोरखेलको नेतृत्वमा दिउँसो १ बजे डेलिगेशन जान लागेको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए।